China Aluminium Dome Head Blind Rivet Ine Huru Musoro fekitori nevagadziri | Yuke
Aluminium Dome Head Bofu Rivet NeMusoro Mukuru
Ichi chigadzirwa chakavhurika magumo bofu rivet.Zvigadzirwa zvedu hazvina mabhura. Musoro wembambo wakakwana, wakatsetseka uye wakatwasuka. Iyo riveting mhedzisiro yakanaka uye chimiro chiri compact. Chigadzirwa chacho chinodzivirira corrosion, inodzivirira uye inogara kwenguva refu. Iine huwandu hwakawanda hwekushandisa.
Ichi chigadzirwa chakavhurika magumo bofu rivet.Zvigadzirwa zvedu hazvina mabhura. Musoro wembambo wakakwana, wakatsetseka uye wakatwasuka. Iyo riveting mhedzisiro yakanaka uye chimiro chiri compact. Chigadzirwa chacho chinoshingirira mukuora, chinodzivirira uye chinogara kwenguva refu. Iine huwandu hwakawanda hwekushandisa.
Material: Aluminium Muviri / Steel Stem
Surface Kupedzisa: Polish/Zinc Plated
Standard: IFI-114 uye DIN 7337, Non-standard
Application: Elevator, kuvaka, kushongedza, fenicha, indasitiri.
Kukwanisa Kugadzira: 500 Matani / Mwedzi
Mutauro: Remaches, Rebites
Chikwata chedu cheinjiniya chine ruzivo chinogona kugadzira zvigadzirwa uye kugadzira zvinoenderana nemasampuli, kudhirowa kana mazano chete.
1.Various mavara mapofu rivets
2.Various marudzi bofu rivet. kusanganisira yakavhurika magumo kutenderera musoro, yakavhurika magumo countersunk musoro, yakavhurika magumo musoro mukuru bofu rivet uye zvichingodaro.
Nguva Yekutungamira: 15 ~ 20 Zuva Rekushanda re20' Container, 5days kana uine stock
2. Diki ruvara bhokisi,, 45degree dhirowa ruvara bhokisi, hwindo bhokisi, polybag, blister. Kaviri shell kurongedza kana sezvinodiwa nevatengi.
YUKE ine simba rekugadzira rakasimba uye inotengesa hunyanzvi hwekuita fasteners. Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana nepasi rose mhando system, senge ANSI neBS.
Kambani yedu inopa zvemhando yepamusoro zvigadziriso zvehunyanzvi zvemaindasitiri minda, senge mota, chivakwa, kutaurirana, elekitironi, simba, midziyo yemagetsi yemumba uye fenicha, etc. Kwemakore ese budiriro, tinogona kuvimbisa mhando yepamusoro yezvigadzirwa zvedu.
Tikugashirei kubvunza, kutaurirana uye kuodha ese akateedzana fastener kubva kumabhizinesi munyika dzese, isu tichapa zvese –nzira "one- stop kutenga zvachose" sevhisi yako.
Zvakapfuura: Dome Head Bofu Rivet Stainless Simbi
Zvinotevera: Yakazara Steel Dome Musoro Bofu Rivet NeMusoro Mukuru
Yakavharwa End Dome Head Bofu Rivet
Stainless Simbi Vhura Dome Musoro Bofu Pop Rivet
yakazara Stainless Simbi yakavhurika magumo pop rivets
Simbi Bhatani Musoro Bofu Rivet